Frenkie de Jong oo shaaca ka qaaday xiddiga inta ugu badan caawiyay tan iyo markii uu yimid Barcelona – Gool FM
(Spain) 20 Luulyo 2019. Xiddig dhawaan galka ah ee Barcelona Frenkie de Jong ayaa xaqiijiyay in Sergio Busquets uu yahay ciyaaryahanka inta ugu badan ku dhex caawiyay qolka dhar badalashada, tan iyo markii uu yimid kooxda.
Dhinaca kale laacibkan reer Holand ee Frenkie de Jong ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inaysan jirin wax farqi ah ee u dhexeya falsafada Barcelona iyo kooxdiisii hore ee Ajax Amsterdam.
De Jong ayaa la sheegay inuu ugu wareegay kooxda Barcelona qiimo dhan 75 milyan oo euro, lagu daray 11 milyan oo dheeri ah oo ku xirnaan doonta bandhiggiisa. wuxuuna saxiixay heshiis cusub oo 5 sanadood ah oo ku eg xilli ciyaareedka 2023/24.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu dabaxay wareysi uu bixiyay Frenkie de Jong kaddib imaatinkiisa kooxda Barcelona waxaana hadaladiisa ka mid ah:
“Waxaan sheegi karaa in Sergio Busquets uu waxyaabo badan iga caawiyay, marka aan u baahanahay inaan wax ka ogaado kooxda ama magaalada, wuxuu iga caawiyaa wax walba”.
Intaas kaddib Frenkie de Jong ayaa waxaa wax laga weydiiyay farqiga u dhexeeya falsafada Barcelona iyo kooxdiisii hore ee Ajax Amsterdam wuxuuna ku jawaabay:
“Waxay aad isaga egyihiin dhanka falsafada, waxaan u maleynayaa in farqiga ugu wayn uu yahay luuqada oo kaliya, laakiin saaxiibadeyda ayaa iga caawiya wax badan, waxaan dareemayaa inuu i soo dhaweynayo”.
“Wali kalama aanan hadlin macalinka booska aan ka ciyaari doono, waxan ka ciyaari karaa xarun kasta oo khadka dhexe ah, wali ma uusan ii sheegin hadii aan halkaan ka ciyaarayo ama halkaas”.